Daacish oo beddelaysa Istratejiyada, khasaaraha badan oo gaaray darteed – Kasmo Newspaper
Daacish oo beddelaysa Istratejiyada, khasaaraha badan oo gaaray darteed
Updated - October 1, 2017 6:31 am GMT
London (Kasmo), In wax yar ka badan 3 sano oo qur ah ka dib, markii Ururka Daacish ku soo biiray saaxadda Caalamka, qabsashadiisii dhul ballaaran oo u dhexeeya Suuriya iyo Ciraaq, dagaalkii Caalamiga ahaa ee lagu qaaday horumar muuqda ayuu samaynayaa.
Si kastaba ha ahaatee, sida ku qoran maqaalka “How ISIS is Transforming”, ee 25kii September ku soo baxay Wargayska “Foreign Affairs”, wali lama gaarin wakhtigii laga hadli lahaa jabka kama dambaysta ah ee ururka la baxay Khilaafada Islaamka.
Bal iska daaye, Dunidu waxay arki doontaa, kalaguurka iyo sii burburista Daacish oo ahaa Urur Kacdoon oo xarumo cayiman leh oo isu beddelaya Shabakad argagixiso oo suuq madow ah kuna firirsan Gobolka iyo Dunida inteeda kale.
Bilihii u dambeeyay Daacish waxay jab weyn kala kulantay dagaallada Suuriya iyo Ciraaq: Suuriya xoogagga “Syrian Democratic Forces” ee Maraykanku taageero waxay caddeeyeen qasashada 80% Raqa, Caasimaddii Daacish.
Ciidammada Ruushka iyo kuwa Suuriya waxay wadaan dagaalka lagu xoreynayo Deir Ezzor oo istrateeji ah kuna taalla xadka Ciraaq, muddo dheerna loona adeegsan jiray marinka sahayda iyo gurmadyada u socda jihaad-doonka.
Ciraaq: ciidammada Xukuumaddu waxay Maleeshiyaadka Daacish ka durkiyeen magaalooyin badan oo istrateeji ah, sida Falluja, Ramadi, Tal Afar iyo Mosul oo ahayd halkii Al-Baqdadi uga dhawaaqay Khilaafada.
Shaki kuma jiro in xoogagga kala gadisan ee dagaalka kula jira Daacish yeelanayaan gacanta sare, waxaana jira sheekooyin ka marag furaya khilaaf gudaha ah, iyada oo moralka mintidiintu hooseeyo, ka dib markii uu fashilmay mashruucii dhismaha dowladdii ay rabeen.
Sababahaha jabka faraha badan dartood Daacish waxaa khasab ku noqotay in ay baddesho istrateejiyadii iyo taktikadii hore, una sii diyaargarowdo wajiga dambe ee dagaalka. Warkii oo kooban Daacish waxay iska beddelaysaa urur kacdoon, isuna beddelaysaa urur argagixiso.
Farqiga u dhexeey 2da qolana waa midka hore oo haysta dhul uu qabsaday iyo dadweyne uu u taliyo, mararka qaarna soo abaabuli karo, laakiin argagixisadu ma lahan awooddaas, waxayna fulisaa weerarro kooban oo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah.
Sidaa darteed Dowladaha waxaa la gudboon in ay uga jwaab celiyaan Istratejiyad dhammaystiran oo tillaabooyin siyaasadeed wata, si xogta sirdoonka iyo hay’adaha nabadgalyada loo wadaago iyo barnaamijyada ku wajahan dagaalka argagixisada iyo xagjirka oo si fiican loo maalgaliyo.